RetroPie: avadiho ho lasa milina Retro-lalao ny Raspberry Pi anao Fitaovana maimaim-poana
RetroPie: avadiho ho lasa milina Retro-lalao ny Raspberry Pi-nao
Raha liana amin'ny lalao video Retro ianao, ireo kilasika mahafinaritra izay tsy miala amin'ny lamaody, dia azo antoka fa mitady ireo emulator sy tetikasa mahaliana rehetra mipoitra manodidina ny Raspberry Pi ianao. Iray amin'ireo tetikasa ireo hankafizanao ny retrogaming ny RetroPie, ary hilazako ny lakile rehetra.
Ny marina dia mihamaro hatrany ny liana amin'ity karazana tetikasa ity, hatramin'ny taona cvondron'ireo mpampiasa izay maniry fatratra ireo videogames ireo avy amin'ny sehatra taloha dia tsy mijanona mitombo. Raha ny marina, na ny mpanamboatra sasany toa ny SEGA na Atari aza dia nanapa-kevitra ny hanome ny sasany amin'ireo masinin'izy ireo taloha fanindroany hamaly io fangatahana goavana io ...
Mety ho liana amin'ny hahafantatra an'io koa ianao emulator tsara indrindra ho an'ny Raspberry Pi, ary koa ireo tetikasa hafa toa RecalBox y Batocera. Ary koa gadget ho an'ny mpanara-maso hamorona anao manokana milina arcade.
1 Inona no atao hoe RetroPie?
1.1 Sehatra nanahaka
2 Ahoana no ahafahako manana RetroPie?
2.1 Mora kokoa (mpampiasa vaovao)
2.2 Mitadiava ROM
3 Misy add-ons
Inona no atao hoe RetroPie?
RetroPie dia tetikasan'i loharanom-baovao misokatra natao manokana hanovana ny SBC anao ho ivon'ny lalao video Retro, izany hoe, milina lalao Retro tena izy. Ho fanampin'izany, mifanaraka amin'ny takelaka toy ny Raspberry Pi amin'ny endriny maro samihafa izy io, fa koa amin'ny iray hafa toa ny ODroid C1 sy C2, ary na dia ho an'ny PC aza.
Hatramin'ny kinova RetroPie 4.6 dia tafiditra ao koa ny fanohanana ny Raspberry Pi 4
Ity tetikasa ity dia miorina amin'ny tetik'asa efa fantatra efa malaza toa ny Raspbian, EmulationStation, RetroArch, Kodi sy ny hafa efa misy. Izany rehetra izany dia atambatra amin'ny tetikasa tokana afovoany hanolotra anao sehatra iray feno sy tsotra hany ka tsy manahy afa-tsy ny milalao ny lalao Arcade tianao ianao.
Fa raha mpampiasa mandroso ianao, dia misy lafika tsara koa ao anatiny fitaovana isan-karazany fanamboarana hahafahanao manova sy manamboatra ny rafitra saika araka ny itiavanao azy.
RetroPie afaka maka tahaka sehatra lalao video mihoatra ny 50 hahafahanao mampiasa ny ROM an'ny lalao ataony hamelomana azy ireo anio. Ny malaza indrindra dia:
Loko paosy NeoGeo
Ary mbola betsaka ...
Ahoana no ahafahako manana RetroPie?
Azonao atao misintona RetroPie afaka tanteraka avy amin'ny tranonkala ofisialy an'ny tetikasa. Saingy alohan'ny handehananao haingana ao dia tokony ho fantatrao fa ny RetroPie dia afaka miasa amin'ny fomba maro:
Apetraho amin'ny rafitra fiasa efa misy, toa ny Raspbian. Fampahalalana bebe kokoa ho an'ny Rasbpian y Debian / Ubuntu.
Atombohy amin'ny sary RetroPie avy eo am-boalohany ary ampio rindrambaiko fanampiny.
Ankoatran'io fahaizan-javatra io, ny dingana manaraka hametraka RetroPie avy amin'ny rangotra ao amin'ny SD ireto manaraka ireto:
Sintomy ny sary de RetroPie mifanitsy amin'ny kinovan'ny Pi anao.
Ankehitriny dia tsy maintsy esorinao ilay sary voahidy ao amin'ny .gz. Azonao atao amin'ny baiko avy amin'ny Linux na amin'ny programa toa ny 7Zip. Ny valiny dia tokony ho fisie miaraka amin'i .img fanitarana.
Avy eo ampiasao programa sasany hahafahanao amboary ny SD ary ampitao ny sary avy amin'i RetroPie. Azonao atao izany Etcher, izay mifanaraka ihany koa amin'ny Windows, macOS ary Linux. Toy izany koa ny fomba fiasa ho an'ny rehetra.
Ampidiro ao anaty anao izao ny karatra SD Raspberry Pi ary atombohy izany.
Raha vao manomboka dia mandehana amin'ny menio fikirakira ao amin'ilay faritra Wifi mampifandray ny SBC anao amin'ny tamba-jotra. Ampifanaraho ny adaptatera misy anao, satria mety manana birao antitra miaraka amin'ny adaptatera USB WiFi ianao, na mety manana Pi misy WiFi tafiditra ao anatiny, na mety ampifandraisinao amin'ny tariby RJ-45 (Ethernet). Tsy maintsy misafidy ny safidinao ianao ary mifandray amin'ny tamba-jotra mahazatra anao.
Raha tianao, na dia tsy ilaina amin'ny ankamaroan'ny tranga aza izany dia afaka mametraka rindrambaiko fanampiny na emulator ianao.
Vantany vao tratra, ity manaraka ity dia amboary ny fibaikoinao na mpanara-maso lalao, raha manana izany ianao. Mba hanaovana izany, ny dingana dia:
Ampifandraiso ireo mpanera USB izay anananao. Betsaka ny mpanara-maso mifanentana amin'ny RetroPie ao Amazon. Ohatra ny QUMOX na ny iNNEXT.. Azonao atao koa ny mampiasa mpanara-maso vaovao kokoa.
Rehefa tafiditra, RetroPie dia tokony hanomboka a interface tsara handaminana azy ireo. Ao anatin'izany dia hangataka andiana hetsika amina mpanampy iray izay tokony harahinao izy. Raha manao hadisoana ianao dia aza manahy fa afaka miditra amin'ny menio avy eo ianao hanovana ny fanamboarana amin'ny alàlan'ny fanindriana Start na amin'ny F4 ary manomboka indray.
Aorian'izay izay azonao atao dia mandalo ireo ROM vonona ny hihazakazaka ny lalao video tianao indrindra avy amin'ny Raspberry Pi anao. Azonao atao amin'ny fomba maro izany, ny iray dia amin'ny alàlan'ny SFTP (somary sarotra kokoa), amin'ny alàlan'ny Samba (somary miasa ihany koa), ary ny iray hafa dia amin'ny alàlan'ny USB (tsotra kokoa ary aleon'ny ankamaroan'ny). Ho an'ny safidy USB:
Mampiasà memoara pendrive na USB efa namboarina taloha tao amin'ny FAT32 na NTFS. Samy manompo.
Ao anatiny dia tsy maintsy mamorona a fampirimana antsoina hoe «retropie» tsy misy marika nalaina.
Esory soa aman-tsara izao ny USB ary ampidiro ao a USB port an'ny Raspberry Pi. Avelao mandra-pijanonan'ny LED tsy hirehitra.
Esory indray izao ny USB amin'ny Pi ary apetaho amin'ny PC-nao mandalo ireo ROM ao anatin'ny lahatahiry retropie / ROM. Raha voageja ny ROMs dia mila esorinao izy ireo mba hiasa. Azonao atao ihany koa ny mamorona lahatahiry ao anaty rôma mba hanasokajiana ireo ROM amin'ny alàlan'ny lampihazo, ohatra, azonao atao ny mamorona folder antsoina hoe nes ho an'ny lalao Nintendo NES, sns.
Ampidiro ao anaty Pi anao indray ny USB, miandrasa ny fijanonan'ny LED tsy hirehitra.
ankehitriny hamelombelona ny EmulationStation amin'ny fisafidianana Restart avy amin'ny menio lehibe.
Ary izao dia misy ihany atombohy ny lalao… Raha ny tokony ho izy, hivoahana amin'ny lalao iray asitrikao dia azonao atao ny mampiasa ny bokotra Start and Select izay tsindrio miaraka amin'ny mpanara-maso lalao ary hiverina amin'ny menio lehibe RetroPie…
Mora kokoa (mpampiasa vaovao)
Si tsy te hanasarotra ny fiainanao loatra ianao amin'ny ROMs na amin'ny fametrahana ny RetroPie, tokony ho fantatrao fa efa mivarotra karatra SD miaraka amin'ity rafitra napetraka ity izy ireo, ankoatr'ireo ROM an'arivony efa tafiditra ...
Ohatra, ao amin'ny Amazon mivarotra iray Karatra microSD 128GB fahaizan'ny marika Samsung ary efa misy ny RetroPie, ary koa ROM lalao video mihoatra ny 18000 efa tafiditra.
Tadidio fa misy pejy web maro amin'ny Internet mamela izany misintona ROM tsy ara-dalàna, satria kilalao horonantsary fananana izy ireo. Noho izany, tsy maintsy ataonao amin'ny raharahanao manokana izany, amin'ny fahafantarana fa mety manao heloka bevava amin'ny fananana ara-tsaina ianao.
Ankoatr'izany, amin'ny Internet Archive afaka mahita ROM lalao video taloha be ianao. Ary mazava ho azy fa manana izany koa ianao ROM maimaim-poana tanteraka ary ara-dalàna raha tianao izy ireo, toa an'ireo Mame.
Tokony ho fantatrao fa misy maro be Tetikasa DIY mamorona milina Arcade mora vidy sy kely miaraka amin'ny Raspberry Pi, ary koa mamorona konsol hafa maro tamin'ny lasa tamin'ny fomba tsotra. Ho an'izany, RetroPie dia manome anao antontan-taratasy mahaliana ihany koa:
DIY ho an'ny akorany akrilika
Saingy tsy izany ihany no zavatra azonao an-tanana, misy ihany koa izy ireo kitapo tena mahaliana azonao atao ny mividy hanangona ny console retro amin'ny fomba tsotra:
GeeekPi akorandoha Retro maka tahaka ny SuperCOM
NESPi Tranga hafa izay maka tahaka ny angano Nintendo NES
Owootecc tranga tahaka ny GameBoy ho an'ny Raspberry Pi Zero
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitaovana maimaim-poana » Raspberry Pi » RetroPie: avadiho ho lasa milina Retro-lalao ny Raspberry Pi-nao
millis (): ny zavatra rehetra ilainao ho fantatra momba ny asan'ny Arduino
Odroid N2: SBC hafa azo soloina amin'ny Raspberry Pi